Ifulethi elinokuthula nelithokomele - I-Airbnb
Ifulethi elinokuthula nelithokomele
Bessemer, Alabama, i-United States
Leli yifulethi elibanzi elitholakala eBessemer. Ilungele iBryant Denny Stadium, imizuzu engama-20 ukusuka edolobheni laseBirmingham. Ilungele izithandani, izigigaba zodwa, abahambi bebhizinisi abahlobene ne-UAB noma abafundi, imindeni yokuvakasha okunwetshiwe. Ifakwe ngokugcwele nge-WiFi yejubane eliphezulu. Indawo yokupaka iyatholakala.
IDirectv iyatholakala endlini yokuphumula. Uzonikezwa izinto zokugeza kanye namathawula amasha.
Ikhishi elisanda kulungiswa kabusha, eligcwele, amagumbi amabili okulala kanye negumbi lokuhlala elinamasofa amabili athokomele. Womabili amakamelo okulala anemibhede elingana nendlovukazi futhi ahlanganyela negumbi lokugezela eligcwele. Ilungele izivakashi ezi-5 noma eziyisi-6. Kunikezwe amalineni ombhede namabhavu. Leli lihle kakhulu, lihlanzekile, futhi lihlome ngokuphelele futhi linefenisha enkulu yokulala emibili efanelekile.
I-Air Mattress iyatholakala uma uyicela.
I-pool iyatholakala kanye ne-charcoal grill.
Asinacala ngomonakalo wokulahlekelwa kunoma yiziphi izinto zomuntu siqu endaweni yethu. Izinto zezihambeli ezingafunwanga zizonikelwa ezindaweni zokukhosela noma kulahlwe kudoti phakathi namahora angu-24.
Kukhona imali yokuhlanza engu-$50.
Izivakashi zikwazi ukungena kulo lonke ifulethi ngokufaka ikhiphedi kanye nekhodi yomuntu ngamunye enezinhlamvu ezi-4.
Azikho izilwane ezifuywayo ezivunyelwe.
4.85 · 79 okushiwo abanye
Eduze nezindawo zokudlela ezisheshayo kanye ne-Walmart.
ngiyatholakala ngesikhathi sokuhlala kwakho. Ngokuvamile izophendula phakathi nehora.
Hlola ezinye izinketho ezise- Bessemer namaphethelo